एउटी नर्सको अनुभव- आफूलाई लागेपछि थाहा भयो कोरोना के हो? Media for all across the globe
तस्बिर : आयोमेल
अझै पनि ‘कोरोना केही होइन’ भन्नेहरु छन्।
तर, कोराना के हो? भन्ने कुरा आफूले भोगेपछि मात्रै थाहा हुन्छ।
‘जबकि अरुलाई पर्दा केही होइन, निको हुन्छ भन्न जति सजिलो छ, त्यति आफूलाई पर्दा नहुने रहेछ। कोरोनाको लक्षण भएपछि झन् गाह्रो हुने रहेछ,’ चागुनारायण नगरपालिका–९ मा बस्ने स्टार्फ नर्स सुजना बासुकलाको भोगाइ यस्तै छ।
भक्तपुरको च्याम्हासिंहस्थित जनस्वास्थ्य सेवा केन्द्रको आकस्मिक कक्षमा काम गर्ने स्टाफ नर्स हुन् सुजना।
सुरुमा उनलाई ढाड दुख्ने समस्या भएको थियो। जुन कोभिडको दुर्लभ लक्षण रहेछ। पछि सुजनालाई डिउटीमा काम गर्दा निकै थकान महशुस भएको उनी बताउँछिन्।
प्रकाशित मिति: : 2020-10-28 18:20:00